Sceneries dị na Rikoooo na-adịghị kwuru na-akpaghị aka, bụ n'ebe a ngwọta? (Win 7 / 8 +)
Usoro a arụ ọrụ na ma Prepar3D na FS2004.
Site ndabara, FSX arụnyere na «C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X». Nsogbu bụ na on Windows 7 na 8 + ma ọ bụ ọbụna Windows 10 ị na-adịghị a akara nke faịlụ n'ime «Microsoft Flight Simulator X», nke gbochie a ndutịm ede ihe a nhazi faịlụ. Ga-edozi nsogbu, na-aga «C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Microsoft Games», mgbe ahụ, ime ihe ziri ezi click na nchekwa «Microsoft Flight Simulator X», pịa «Properties», mgbe ahụ, na «Security» tab. Ebe a, họrọ «Ọrụ (xxxxxx)», wee pịa on «gbanwee». Na window meghere, họrọ ọzọ «Ọrụ (xxxxxx)», pịa «Full akara», mgbe ahụ, «Mmezitụ». Ugbu a, ị dị nwere pịa «OK» na Windows ga imelite ikikere.
Ntuziaka oyiyi n'okpuru: